Kali မှာ Kali Linux Live Installer USB ပြုလုပ်နည်း & iso image များအား installer usb ပြုလုပ်နည်း - Khit Minnyo
Kali Kali မှာ Kali Linux Live Installer USB ပြုလုပ်နည်း & iso image များအား installer usb ပြုလုပ်နည်း
Kali မှာ Kali Linux Live Installer USB ပြုလုပ်နည်း & iso image များအား installer usb ပြုလုပ်နည်း
by KhitMinnyo on September 15, 2017 in Kali
လက်ရှိ Windows ကိုလည်း ဖြုတ်မပစ်ချင် Kali ကိုလည်း သုံးကြည့်ချင်သူများ၊ သွားလေရာ သယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ Kali Live USB ကို Kali Linux မှာ ဖန်တီးချင်သူများ၊ Kali Linux ရှိပြီး Windows တင်ဖို့ iso ကို windows installer usb ပြုလုပ်လိုသူများအတွက်ပါ။
ဒီပုံကတော့ 8GB (7.6GiB) ရှိတဲ့ Memory Stick (USB) မှာ Kali Installer တင်ပြီးတဲ့အခါ မြင်ရပုံပါ။ 4.9GiB အသုံးပြုထားပြီး 2.6GiB free space ကျန်တာကြောင့် Live Mode အဖြစ် အသုံးပြုရင် အနည်းငယ် သိမ်းလို့ ရမှာဖြစ်ပြီး 16GB, 32GB, 64GB, 128GB များနှင့် အသုံးပြုပါက Free Space ပိုများလို့ ပိုမို သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါပုံအတိုင်း Live Mode ကို ရွေးချယ် Enter လိုက်ရုံဖြင့် Kali Linux ကို အလွယ်တကူ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ပါ Movie လေးကိုသာ ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ
ဒီ blog ကလေးကို လာရောက် လည်ပတ်သူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။
By KhitMinnyo on September 15, 2017
sid seo January 22, 2021 at 7:00 AM
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. etcher.download